Ratalata ﻿Jn Ba il y a 5 années
Aleo mifanena amin'ny mpamosavy toa izay (fantaro ny tohiny)...
Mandainga ny Filoham-pirenena, mandainga ny mpanao politika, mandainga ny mpanao gazety, mandainga ny mpitandro filaminana... Dia ahoana koa re ny manraka ?
Nisy ny “ni… ni” izao indray atolotra anao ny “si… si”
“Ni… ni” ve ? Fantatro, fantatrao… Tontolo politika no nampalaza izany fomba fiteny izany. Tsy mahazo milatsaka ho fidiana na i Ravalomanana na i Rajoelina no dikan’ny “Ni… ni”. Izao indray dia arosoko anao ny “Si… si”. Sssss aza mividy gazety ianao fa mbola tsy any io fomba fiteny io. Tsy maninona koa na tsy raisin-jareo aza.